Bogga ugu weyn Sida Lacag Loogu Sameeyo Forex Iyada Oo Aan La Ganacsan | 2022
Suuqa forex wuxuu soo saaray milyaneero. Maanta, waxay matalaan mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee laga ganacsan karo adduunka.
Laakiin ganacsigu ma noqon karaa habka kaliya ee lacag looga sameeyo suuqa forex? Maya! Wali waxaa jira dhowr siyaabood oo aad u isticmaali karto si aad uga macaashto suuqan.
Marka, inta aan ka jawaabno su'aasha "sida lacag loogu sameeyo forex iyada oo aan ganacsi lahayn" maqaalkan, waxaan sidoo kale muujin doonaa qaar ka mid ah hababka ugu fiican iyo xirfadaha aad ka faa'iideysan karto ganacsade ahaan suuqa forex.
1. Noqo Dillaaliye Forex
Inaad noqoto dillaaliye forex ma fududa laakiin waa waddo adiga kuu taal markaad rabto inaad lacag ka samaysato Forex adigoon ka ganacsan. Adigoo ah ganacsade Forex, waxaad si fudud u leedahay mas'uuliyadda isku xirka iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha.
Dillaaliye forex ahaan, waxaad ka kasban kartaa qayb yar oo ka mid ah xaddiga ganacsiga ee u dhexeeya iibiyaha iyo iibsadaha.
Dillaaliyeyaasha Forex badiyaa waxay ka faa'iideystaan ​​kororka lama filaanka ah ama hoos u dhaca sicirka. Argagaxaas oo kale, ganacsatadu waxay u badan tahay inay iibiyaan oo wax ku iibsadaan muddadan gudaheeda.
Bilaabidda Sida Dillaaliye Forex
Haddii aad rabto inaad noqoto dullaal Forex ah, waa inaad u baahan tahay qalab gaar ah si aad u shaqeyso. Waqti ka hor, waxaad u baahan lahayd kaliya taleefan sidaan ku aragnay filimka caanka ah "The Wolf of Wall Street", si kastaba ha ahaatee, hadda waxaad u baahan tahay qalab IT ah oo kaa caawin doona inaad la socoto isbeddellada kala duwan isku mar.
Marka la soo koobo, aqoon wanaagsan oo ku saabsan nidaamka ganacsiga iyo macmiil ballaaran ayaa kaa caawin doona inaad ku noolaato nolol wanaagsan sidii dillaaliin forex ah. Marka, hadda waad ogtahay hal jawaab su'aasha "sida lacag looga sameeyo Forex iyada oo aan la ganacsan"
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska Kahor intaadan maalgelin Ethereum- Tani waa waxa aad wajahayso 2022 Ka hubi Out
2. Noqo La -taliye
La-talintu waxay noqotay ganacsi waqti-buuxa ah. Dadku waxay maamulaan noocyo kala duwan oo shirkado la-talin ah oo maanta bixiya xalal suuqyo kala duwan.
Adigoo ah la -taliye suuqa Forex, waxaad si fudud ula talinaysaa ganacsatada isbeddellada suuqa iyo dhaqannada ganacsi ee saxda ah. Waxaad lacag ka qaadataa kulan kasta oo la -talin ah waxaadna ka tagtaa ganacsadaha si ay u gaaraan go'aankooda.
Bilaabidda La -taliye ahaan
Ma noqon kartid lataliye xirfad leh adigoon aqoon shaqo u lahayn isbeddellada suuqa iyo calaamadaha. Marka, ka dib markaad naftaada ku horumariso aaggaas, waxaad u soo bandhigi kartaa adeegyadaada ganacsatada xiisaha leh.
Waxbarashadu weligeed kuma dhammaato suuqa, markaa waa inaad lahaataa kaabayaasha IT -ga ee saxda ah si ay kaaga caawiso inaad qaadato go'aanno ganacsi oo sax ah.
3. Ganacsiyada oo laban -laabo
Haddii aadan ku qanacsanayn inaad halis gasho oo aadan sidoo kale lahayn dulqaad inaad barato ganacsi habboon, waxaad si fudud u koobi kartaa xirfadaha.
Meelo badan ayaa kaa caawiya inaad nuqul ka sameysato ganacsi ay sameeyeen dallaaliin xirfadlayaal ah. Habkan, waxaad halis yar u tahay oo aad lacag badan ku kasban kartaa.
Sida laga soo xigtay Forex Brokers, aaladahaan qaarkood waxaa ka mid ah:
eToro - Madasha guud ee ugu wanaagsan ee ganacsiga nuqul
Pepperstone - Meelo badan oo nuqul ganacsi ah
FXCM - Dukaanka App ee FXCM ee ganacsiga otomaatiga ah
Darwinex - Bulshada ganacsiga nuqulka bulshada ee gaarka ah
AvaTrade - Nidaamyada ganacsiga nuqullo badan
HotForex - Suugaanta MetaTrader oo buuxa
FxPro - Suugaanta MetaTrader oo buuxa
Wadahadallada aan la yeelannay, waxaa iska cad inaad si raaxo leh lacag uga samayn karto suuqa Forex. Go'aanka kaliya ee ay tahay inaad qaadato wuxuu noqon doonaa doorashadaada dakhliga.
Waxaan si xoog leh u aaminsanahay inaad taqaan sida lacag looga sameeyo suuqa Forex adigoon ka ganacsan waxaadna macasalaamayn kartaa inaad lacag lumiso oo aad qaaddo khataro aan la xisaabin.
Ka-ganacsiga iyo maalgashiga Bitcoin, Ethereum, iyo lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' waxay noqon karaan kuwo dhib badan tallaabada ugu horreysa. Waxaa jira…